कोरोना नियन्त्रणको लागि सक्रिय भए गोरखाको सहिद लखन गाउंपालिका र वडा ७ का स्थानिय वासिहरू – Palika Times
कोरोना नियन्त्रणको लागि सक्रिय भए गोरखाको सहिद लखन गाउंपालिका र वडा ७ का स्थानिय वासिहरू
३० बैशाख, गोरखा। गोरखामा लकडाउन भएदेखि सबै जना घरभित्रै थुनिएका छन्। अत्यावश्यकीय सामान लिन बाहिर निस्कन पनि सहज छैन। निस्कनै पर्ने काम भए मुखमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्र निस्किन पाउने गरि स्थानीय तहहरुले नियम बनाएका छन्। कोरोनाको महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न स्थानीय तहले सरकारको नियमित कार्यक्रम बाहेक केही फरक प्रयास पनि थालेका छन्। गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर ७ यसैको उदाहरण हुन्। स्थानीय तहको फरक प्रयासले विपदको यो घडीमा जनतालाई केही राहत दिने र कोरोनाको महामारीबाट बचाउने देखिन्छ।
गाउँ गाउँमा कोरोनाको बिरामीहरु देखिएपछि गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर ७ ले आफ्नै सक्रियतामा कोरोना नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। अक्सिजनको अभाबमा नेपाली नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउदाको आफन्तको पिडा हेरेर सरकार मुक्दर्शक बनिरहेको बेलामा वार्ड नम्बर ७ का युवाहरुको पहलमा छोटो समयमा लाखौं रकम जम्मा गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्न लागि परेका छन्।
समिति नै बनाएर कोरोना नियन्त्रणको प्रयास
सहिद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर ७ का सक्रिय युवाहरुको पहलमा समिति नै बनाएर रकम जुटाइरहेका छन्। आपतकालिन कोष आर्थिक समिति गठन गरेर कोरोना लाइ नियन्त्रण गर्न देश बिदेशमा बस्ने सहयोगी दाता हरु बाट संकलित रकमले विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद गर्ने योजना बनाएका छन्। सोहि आर्थिक समितिका सल्लाहकारमा जिबन बहादुर आले मगर, गौतम प्रसाद खनाल लगाएत ९ जना रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यकारी समितिमा प्रेम श्रेष्ठ को नेतृत्व मा ११ जनाले सहयोग संकलन गरिरहेका छन्।
वार्ड नम्बर ७ का वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठ को बिशेष पहलमा सक्रिय युवाहरुले आर्थिक सहयोग जुटाइरहेका छन्। श्रेष्ठका अनुसार, यो महामारीमा सरकार को मुख हेरेर बस्ने हो भने अकालमै हामीले पनि मृत्युबरण गर्न पर्ने अबस्था आउन सक्छ त्यसैले हाम्रै पहलमा आर्थिक अभियान चलाइरहेका छौं। आज सम्ममा हामीले लगभग ८ लाखको हाराहारीमा रकम जुटाइसकेका छौं र १/२ दिन भित्रै आबश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद गर्ने योजना छ।
श्रेष्ठका अनुसार, बुन्कोट स्वास्थ्य चौकी संचालन समिति एबम् सहयोग कमिटिका प्रतिनिधिहरु बसेर हिजो मात्र छलफल गरेर कोभिड आइसोलेशन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेका छौं। कोभिड आइसोलेशन सेन्टर संचालनको लागि चाहिने आबश्यक सामाग्रीहरुको दर रेट पनि माग माग गरेका छौं। अक्सिजन सिलिन्डर देखि बेडहरु गरेर हामीले २४ प्रकारका सामान हरु खरिद गर्न लागेका छौं, श्रेष्ठले भने।
यो अभियानलाइ सहयोग गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्न सबैलाई सामाजिक संजाल मार्फत आग्रह गरेका छन्। समितिका संयोजक प्रेम श्रेष्ठ भन्छन, सरकार निदायो भन्दैमा हामि युवा हरु निदाउने कुरा आउदैन त्यसैले हामीले पहलकदमी लिएका हौं र यो अभियानमा जोडिन सबै वडा बासीहरुलाई आग्रह गरिराखेका छौं।
गाउँपालिकाको सहयोग पनि निरन्तर रहन्छ : प्रशासकिय अधिकृत जिबन ब. आले मगर
सहिद लखन गाउँपालिका का प्रशासकीय अधिकृत जिबन ब. आले मगरका अनुसार, कार्यालयको तर्फ बाट सबै वडाहरु लाइ आबश्यक सहयोग गरिराखेको र अझै योजना मुताबिक सबै संग समन्वय गरि अघि बढ्ने र यो महामारी मा जनस्तर बाट भएको कदम अत्यन्तै स्वागत योग्य रहेको पनि बताए। गाउँ पालिकाले पनि ७ वटा बेड सहित को आइसोलेशन सेन्टर संचालनमा ल्याएका छौं र यसरि नै अरु वार्ड मा पनि जनस्तर बाट पहलकदमी भैराखेको छ। यही रफ्तार मा हामि जाने हो भने हामीले बिरामीहरुको ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ र सबैमा सचेत रहेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि आले मगरले आग्रह गर्नु भएको छ।
जसपा ठाकुर पक्षका सांसदरु भक्तपुरको रिसोर्टमा